Sohaib Hasan rasmi ah oo la leh shirkadda Dubai City
Ku soo Dhawow Khabiirada Fikradaha
Kusoo dhawow Sohaib Hasan's LinkedIn Career Quudinta. Macaamiilyaasha iyo kuwa raacsan oo ka socda bartayada warbaahinta bulshada ayaa lahaan doona quudintii ugu dambeysay ee Sohaib ee maqaallada maalinlaha ah ee Fursadaha Shaqada, Talooyinka Shaqada, Dhiirrigelinta iyo waxyaabo kaloo badan.
Waxaa laga yaabaa inay tahay ruqsadda waa cashar dheer oo aan ku sii wadno ...
Sohaib Hasan waa hindisaha hirgalay iyo caalam ahaanba khibrad leh oo leh dabeecad cajiib ah si uu wax u qabto oo uu si adag u shaqeeyo.
Khibraddiisa cajiibka ah ee La-Taliyaha HR (Jarmalka, UK, Shiinaha, Pakistan iyo UAE) waxay horey u caawisaa kumanaanka shaqo doonka ah ee adduunka.
Sohaib wuxuu la shaqeeyaa aragti yaab leh si uu u caawiyo kuwa kale. Waxaana hubaal ah inuu ku dhow yahay tobanaan sano oo guusha ah Dubai. Intaa waxaa dheer, in karti loo yeesho howlaha HR, laga soo dejiyo qaabeynta siyaasada iyo Hirgalinta. Iyo sidoo kale Ujeeddooyinka iyo Hormarinta barnaamijyada barnaamijka ku saleysan barnaamijka HR. Illaa iyo qabashada howlaha aasaasiga ah ee HR ee qorista, Xulashada, Tababarka, Horumarinta iyo Qiimeynta Waxqabadka si loo siiyo la-talin khuburo murashaxiinta.
Isaga oo leh xiriirkiisa xoogan iyo xirfadaha shaqsiyadeed, wuxuu ku fiican yahay horumarinta xiriirka uu la leeyahay daneeyayaasha gudaha iyo dibedda. Intaas waxaa sii dheer, Sohaib Hasan waxay si joogto ah ugu dadaaleysaa inay ka caawiso ganacsiyadu inay dhisaan nidaamyo HR oo hufan iyo habraacyo iyagoo dejinaya oo fulinaya geedi socodyo iyo istiraatiijiyado wax ku daraya qiimaha marka la eego dhimista qiimaha shaqaalaysiinta iyo kordhinta hufnaanta Kheyraadka.
Kor u qaad Dubai
Speaker Motivational iyo Speaker Kalkaaliyaha
Sohaib Hasan waa hindisaha dhiirigelinta ee wadnaha iyo tababare kaas oo ugu horreyn lagu calaamadiyay xeelado hal abuur leh oo lagu hormarinayo waxtarka ururrada iyo sidoo kale horumarinta iyo furfurida kartida aadanaha.
Sohaib Hasan ayaa sidoo kale aaminsan in la caddeeyo qarsoodiga qarsoon, ka soo baxaya aagagga raaxada iyo jebinta cabsida cabsida. Fikradaha dhiirigelinta iyo tababbarka ayaa ka buuxa tamar iyo waxqabad. Qorista iyo wadaagida fikradaha dhiirigelinta waa mid ka mid ah waxqabadka wadnaha ah ee aan si dhib yar u shaqeyneyn oo joogto ahna firfircoon.
Sohaib Hasan - MY DIVERSE ARRIMAHA WAALIDKA
• Qaadashada Talenta
• Baadhitaanka murashaxiinta, wareysiga iyo xulashada
• Tababar iyo shaqaale shaqaale
• Hadafka udub-dhexaadka iyo hoggaanka kooxda ka shaqeynta
• Dhiirigelinta shaqaalaha iyo hanuuninta & Hawlgalka Shaqaalaha
• Maaraynta isku dhaca
• Siyaasadaha shirkadaha iyo qaabeynta nidaamyada
• Horumarinta iyo bixinta qalabka tababarka iyo content
• Business horumarinta & suuqgeynta warbaahinta bulshada
• Qorsheynta xayeysiis, nuxur iyo calaamad
• Barnaamijyada kombiyuutarada barnaamijyada hawlaha ganacsiga oo siman
Ku soo biir Sohaib Hasan Telegram
Wixii dheeraad ah talooyinka xirfadaha iyo in lagu ogeysiiyo fiidiyowyada soo socdaa ku biiraan Telegram Channel on mobile, Riix link this:
La xiriir Sohaib Hasan
Maxaad ka qabanaysaa Dubai